Big Data Vs. Data Science - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kuwedzera kwekushanduka kwe nhamba iyo inobata nehuwandu hwemashoko nerubatsiro rwekombiyuta yesayenzi teknolojia. Yakaridza yakakosha role mukuwedzera kwe chakagadzirwa njere, Machine pakudzidza, ivo Indaneti zvinhu (IoT), nezvimwe.
guru dhata analytics inobatsira masangano kushandisa hunyanzvi hweruzivo kuti anzwisise musika usina kushandiswa, nekudaro kuwedzera kukwikwidza uye kushanda nesimba. Pane rimwe divi, data science inonangana zvakanyanya pakupa maitiro ekuenzanisa uye nzira dzekuongorora ruzivo nenzira chaiyo.
Huwandu hweruzivo rutsva rwakaunganidzwa nemakambani rwakakura. Kuedza kushandisa ruzivo urwu kuburitsa zviono zvinogoneka data science.
Data Science inoshandisa dzidziso dzedzidziso pamwe nedzinoshanda nzira dzekuwana nzwisiso kubva muhuwandu hwakawanda hweruzivo. Nekune rimwe divi, data hombe idziva reruzivo rusina kurongeka rusina kukosha kwekuzvarwa kunze kwekunge rikaongororwa nemafungiro ekudzora uye ekuita.
Kuongorora kukuru kwedata kunosanganisira huwandu hukuru hweruzivo rwunoda kucherwa. Data yesayenzi tizvishandise machine learning algorithms ekugadzira uye kukudziridza manhamba ezviverengero kuti aburitse nzwisiso kubva murwi werimwe ruzivo rusina kurongeka.